Noziibele fi rifeensa saddan - Storybooks Minnesota
Noziibele fi rifeensa saddan Nozibele and the three hairs Nozibele y sus tres cabellos
Yeroo duri, dubarri sadii qoraan guruu deeman.
Guyyaa ho’aa waantureef bishan daakuf gara lagaa deeman. Bishaan daakaa, walti naqaa bayee taphaatan.
Akka tasaa akka guyyaa ta’ee baran. Daddafanii gara qayee isaani deebi’an.
Yeroo gara maanatti dhihatan Noziibele harkaa ishee mormaratti kayyachuu ishee argan. Amartii morma ishee gatte turte! “Adaraa nawajjiin dubbati debi’aa” jette isaan kadhatte. Garuu hiriyyoni ishee yeroon barbacha akka darbee ittihiman.
Kanaafu Noziibelen gara laggati deebite. Amaarti ishee argatee jennan gara mana dafte galatee. Garu dukkanni ishee karairra dhoske.
Fageenyati ifaa mana kessa argite. daftee gara manichaa deemte balbalaa isaani rukkute.
Akka ajaa’iba sareen mana bantee akkan jetten, “Mal barbaadee?” Karaan bade lafa cisuun barbaadaa jeteen, Noziibelen. “Seeni yookeen anii ciniina,” jetten sareen. Kanafu Noziibelen gara manaa sente.
Sana booda sareen akkan jette, “Nyaata naf qopheesi!” “Garu ani sareedhaf qophesee hinbeeku” jetteen sareen. “Nyataa qopheesi yookin cincinnina” jetteen sareen. Kanafu Noziibele nyaataa xinno sareef qophesitee.
Kanati ansuudhan sareen, “Lafa cisiichaa natolchi,” jetten sareen. “Sareedhaf goonkumayuu lafaa cisiichaa qopheesu hinbeeku,” jetten Noziibele. “Cisiichaa natolchi yookin cincinnina,” jedheen sareen. Kanaafu Noziibele lafaa cisichaa tolchitef.
Guyyaa hundaa sareef nyaatafi mana qopheesu qabdi. Gaftokko sareen akkan jette, “Noziibele, ani hardha hiriyoota kiyyan gaafachu dhaqaa mana kana tolchi, nyaata qophesi, otto ani hindebi’in dura wantoota kiyyaa nafqulqulessi.”
Akkuam sareenn gara imala deemiteen, Noziibelen rifeensa sadi ofira luqistee. Rifeensa tokko siree jala, tokko immo balbala duuba, fi isaa kan immo kiraala kessa goote. Eegasi gara mana ishee dadftee figde.
Sareen yeroo deebi’u, Noziibele barbaade. “Noziibele, isaa jirtaa?” jedhe. “Ani asna jira siree jala,” jedge rifeesi duraa.” Ani asna jira, balbalaa duuba,” jedhe rifeense lammata.” Ani kiraala keessan jira,” jedhe rifeense saddafan.
Sanaa booda Noziibelen akka isaa goyyomsite bare. Dafee garaa ganda isheeti figee. Garuu obbolegni Noziibele olee gurguddaa qabatanii eegachaa jiru. Sareenis gara mana isaa figee debi’ee lammata gandaa sanatti hinmuldhanne.
Sagni xinno: Seenaa Wangaarii Matayi Lukkuu fi Dhimillee Ilimo harre Sirba Sakiimaa Anaanis fi ogummaa Guyyan gara magaala deeme Lukkuu fi Risaa